Ny rindrambaiko ho an'ny famoronana sy ny fandefasana ny ankamaroan'ny mailaka hafatra.
Matihanina rindrambaiko ho e-mail newsletters
Ny fandaharana dia tsy mitaky ny fametrahana, mihazakazaka taorian'ny unzipping ny laha-tahiry.
Fiteny maro tontolo iainana. Tsy misy sisin-tany.
Fanaovana kajy ny fizarana
Endri-javatraNoho XMailer III mitovy amin'ny hafa
Ny tsy manam-paharoa ny tapakila
Fantina lehibe ny fitaovana ho an'ny tsy manam-paharoa ny sary sy ny soratra.
Feno fanaraha-maso ny
nandritra ny mazava ho azy fa ny fizarana sy an-tsary fanaraha-maso ny dingana.
Antontan'isa mivaky toy izao
Mitady mafy ny fomba maro ny olona hanokatra sy hamaky ny gazety.
Tsotra ny fandefasana
Ny mpampiasa-namana tonian-dahatsoratra dia manampy anao namorona mailaka endrika ho mailaka.
Manomboka tsy misy fametrahana
Ny fandaharam-mitantana na dia eo aza ny tsora-kazo tsy misy momba ny "fitaovana".
Ny ekipa efaha amin'ny mailaka newsletters, nanomboka tamin'ny 2008, ary nandritra izany fotoana izany dia efa nanangona be dia be traikefa. Ao XMailer isika mandrakariva ho tonga saina amin'ny zava-bita sy ny mahazo azy ireo ho maimaim-poana amin'ny fanavaozam-baovao rehetra.
Maimaim-poana sy tsy misy fetra
XMailer dia maimaim-poana fampiharana ny mailaka fizarana. Ny maimaim-poana dikan-manana voafetra ny faharetany ary ny isan'ny nandefa ny mailaka.
Fitaovana ho an'ny matihanina
Ho an'ny mpampiasa, izay te-hahazo ny rehetra ny traikefa sy ny asa fanompoana ho mora ny mamorona mahomby tapakila amin'ny fampiharana iray, dia mandroso ny feno dikan -. Tonga tsirairay taorian'ny fividianana ny karama fahazoan-dalana.
Haingana stats mpampiasa XMailer
Isika dia mitombo hatrany, ary amin'izao fotoana izao:
Sary Sary XMailer III
Andramo izany maimaim-poana
Download ny fampiharana maimaim-poana.
Famerenana ny XMailer IIIMahita ny zavatra ny olona milaza ny momba anay